Igbo, John: Lesson 114 - Ozuzo nke Jizọs (Jọn 19:38-42) | Waters of Life
Home – Igbo – John - 114 (Burial of Jesus)
f) Ozuzo nke Jizọs (Jọn 19:38-42)
38 Mb͕e ihe ndia gasiri, Josef onye Arimatia, ebe ọ bu onye nēso uzọ Jisus, ma na nzuzo n'ihi egwu ndi-Ju, ọ riọrọ Pailat ka o wepu aru Jisus. Pailat nyere ya ikike. Ya mere O biara wepu aru Ya.
Ọ bụghị mmadụ iri asaa na iri na otu nke Kansụl ahụ kwetara na a ga-ekpebi ikpe a gafere megide Jizọs. Ọ na-egosi site na ihe ọmụmụ ochie na-adịbeghị anya chọpụtara na ikpe ga-agafe naanị ma ọ bụrụ na ọ dịkarịa ala abụọ ụda olu. Ma oburu na ha niile kwadoro ikpe onwu, nke a ga-egosi mmebi iwu nke mmadu megide onye ebubo, ma gosi na Nzuko ahu adabala n'ime ikpe ziri ezi. Na nke a, a na-ekpe ikpe ahụ ugboro ugboro ma ihe àmà ahụ nyochachara nke ọma. N'iburu n'uche na iwu a na-emetụta n'oge Jizọs, ọ ga-apụta na ọ dịkarịa ala mmadụ abụọ na-emegide ọchịchị ahụ. Otu bụ Josef nke Arimatia, onye na-eso ụzọ nzuzo (Matiu 27:57 na Mak 15:43). Ọ na-echegbu onwe ya ka ọ ghara ịghara ịnọ n'oche ya na Council ma ọ bụ mmetụta ya na mba ahụ, n'ihi amamihe ya toro eto. Josef were iwe megide Caiaphas maka ikpe na-ezighị ezi ya nakwa maka ịga nzukọ ndị nnọkọ ntụrụndụ. Josef hapụrụ nnọpụiche ma kwupụta n'ihu ọha na ya na Jizọs na-akpakọrịta, mana nkwenye a abịaghị oge, akaebe ya bụ onye na-ekwupụta mkpebi nke Kọmitii. Ma mgbe ahụ, usoro ihe omume mere ka a gafee okwu ahụ ka a kpọgide Jizọs n'obe.
Ke Jizos ama akakpa, Joseph ama aka Pilate (enye ama enyene ndinam emi). Pailat kwetara ihe ọ rịọrọ, ma nye ya ikike ka o wepụ ozu Jizọs n'obe maka olili.Ya mere, Paịlet gbaghaara onwe ya ọbọ ọzọ banyere ndị Juu, bụ ndị ga-adọta ndị omekome ahụ na ndagwurugwu Hinnom nke anụ ọhịa nkịta ga-eri, nke ọkụ na-ere ọkụ gbara ya gburugburu. Chineke zoputara Okpara ya site na ihere. Enye ama okokụre utom esie nte uwa Abasi ke eto. Nna ya nke eluigwe duuru Josef ka o lie Jizọs n'ili kwesịrị ekwesị.
39 Nikọdimọs, bụ onye batara Jizọs n'abalị, bịakwara weta ngwakọta nke myrrh na aloes, ihe dị ka narị kilogram Pound. 40 Ya mere ha were aru Jisus, ke ya n'ezi ákwà ọcha, were utọ di iche iche, dika ọlu ndi-Ju si di. 41 N'ebe ahu ka akpọgidere Ya n'obe, otù ubi ab͕ara ogige di. N'ogige ahụ bụ ílì ọhụrụ nke a na-enwetụbeghị onye ọ bụla. 42 Ya mere, n'ihi ubọchi Nkwadebe nke ndi-Ju (n'ihi na ílì ahu di nso) ha we tọb͕ọ Jisus n'ebe ahu.
Na mberede, Nikọdimọs guzoro n'akụkụ obe. Ọ bụ onye nke abụọ na-ekpe ntuli aka megide mkpebi Kọmitii. O buru ụzọ gbalịa imebi mkpebi ikpe nzuzo nke Kansụl ahụ kpere megide Jizọs, ma rịọ ka onye mara mma nọdụ ala iji nyochaa eziokwu (7:51). Ihe akaebe a nye Jizos rutere, wetara kilogram 32 nke mmanụ otite dị oké ọnụ ahịa, yana akwa akwa iji kechie ozu ahụ, na inyere Josef aka iweda ozu ya ma lie ya mgbe e techara ya, usoro nke ndị isi. Ọ dị mkpa iji mee ka usoro olili ozu ngwa ngwa, iji mezuo ya tupu oge elekere nke isii nke mgbede Friday, nke ahụ bụ mgbe Ụbọchị Izu Ike malitere, na mgbe a machibidoro ọrụ niile iwu. Naanị obere oge fọdụrụ ha.
Nna nke Onye-nwe-ayi Jizos duuru ndikom abua ndia ka ha sọpuru Ọkpara-Ya nwuru anwu, ka nkwa nke Aisaia 53:9 we mezu, na agēlì ya na ndi-ọgaranya na ndi mara nma n'ili di nma. Ịkwatu olulu dị otú ahụ site n'oké nkume bụ ihe dị oké ọnụ ahịa. Ya mere, odigh uzo di nma iji kwanyere Jisos otuto karia ka Josef nye ya udi nke ya nso n'osisi nke obe n'obe obosara. N'ebe ahụ, ha tinyere ozu Jizọs n'osisi nkume n'enweghị igbe ozu, ọ bụ n'úkwù ndị e ji ákwà yikwasị, bụ nke Nikọdimọs wetara.
N'ezie, Jizọs nwụrụ; ndụ elu ala ya biri n'oge nwa okorobịa nke iri atọ na atọ. A mụrụ ya ka ọ nwụọ. Enweghi ihu-n'anya karia karia mmadu itinye ndu ya maka ndi ya huru n'anya.
EKPERE: Onyenwe anyị Jizọs Kraịst, na-ekele gị maka ịnwụ n'ọnọdụ anyị. Na ndị kwere ekwe niile m hụrụ gị n'anya, n'ihi na ịhụnanya gị zọpụtara anyị na iwe Chineke ma mee ka anyị dịrị n'otu nke Atọ n'Ime Otu. Nara m ndụ a ekele maka gị ka m bulie obe gị.
Gịnị ka ili Jizọs na-akụziri anyị?